Momba anay - Wuxi Zhongshuo Machinery Co., Ltd.
Manam-pahaizana momba ny Grat Grinding avy amin'ny Abrasives Belt Grinding for Metal: Io tanjona io dia mitarika antsika hitady fikarohana eo amin'ny sehatry ny fikosoham-bary vita amin'ny vy sy ny polishing avy amin'ny abrasives coated tamin'ny taona 1990. Tamin'ny taona 2005 dia nanomboka namolavola, namorona ary nanangona milina famokarana fehikibo mivelatra ho an'ny metaly izahay. Miaraka amin'ny fanitarana mitohy amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny fanovana ny rafitry ny mpandray anjara, tamin'ny taona 2015 dia niorina Wuxi Zhongshuo Machinery Co., Ltd.
Izahay dia tompon'andraikitra amin'ny orinasa midadasika. Ny orinasa dia ao amin'ny Wuxi City, Jiangsu Province. Renivohitra 1 tapitrisa Euro no renivohitra. Masinina manamboatra. Ny faritra fanamboarana dia mihoatra ny 7000 m2. Ny isan'ireo mpiasa dia mihoatra ny 60, anisan'izany ny injeniera 1 ambaratonga fikarohana, injeniera zokiolona 2 sy injeniera 5. Manana orinasa manam-pahaizana momba ny famolavolana matihanina izahay, fanamboarana, fanangonana, fametrahana, ekipa serivisy sy serivisy. Mamokatra milina fehikibo sy milina polosaly be dia be izahay.milina vita amin'ny fitaratra, milina famandrihana vovoka, milina fanentanana ho an'ny coil metaly sy ny lambany, ao anatin'izany ny fidirana sy fivoahana amin'ny CGL (Coil to Coil Repairing Grinding Line ho an'ny milina mihodina) ary ny CPL (Coil to Coil Polishing Line for Service Center), izany hoe Unwinder, Rewinder, Loading Car, Pinch Roll, Flattener, Crop Sear, Cooling filtration and Recycling system, ny fanasana sy ny fanadiovana rafitra, ny taratasim-pifandraisana, ny rafitra miady amin'ny afo. Mamokatra fitaovana Miara-miasa miaraka amin'ny Vondron'ny Cup Cup Vacuum ho an'ny tsipika fanonitra ho an'ny Sheet to Sheet.
Ny lisitry ny lisitray ao anatin'izany ny Tisco Daming, Wuxi Puxin, Zhejiang Bohai, Western Titanium, Shinva Medical Instrument ary ireo mpanjifa Shinoa malaza fantatra. Izahay dia namoaka ny vokatra azontsika tany amin'ny firenen'i Eropa toa an'i Italia, Turkey miaraka amin'ny CE Certification. Manome fehikibo fametahana fehikibo amin'ny mpanao sinoa izay manome ny fitaovana ho an'ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny nokleary izahay.
Ny mamorona ny lanjan'ny mpanjifa dia ny fitadiavantsika hatrany. Ny fahafaham-ponao dia herin'ny fanavaozana mitohy ataontsika.
Renivohitra efa voasoratra